A na-adịghị ada ada ihihi, ma ọ bụ ihe dị ka na-News Center-Ningbo SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Igwe na-adịghị ala ngwa ngwa, ma ọ bụ ihe yiri ya
Oge: 2021-05-24 Hits: 19
Mgbe ụfọdụ, nyocha ugboro ugboro enweghị ike ịchọta ebe mgbapu, mana taya ahụ ka na-eri eri, kedu ka nke a si bụrụ?
Ihi nwayọ nwayọ dị ize ndụ karịa ịkpọpu akụkụ.Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị adịghị ewepu ikuku, lelee ebe 3 ngwa ngwa iji merie ihe egwu na nchekwa n'oge.
Lelee akụkụ nke taya ahụ
Akụkụ mgbidi taya ahụ na-emebi emebi karịa nzọ ụkwụ ahụ. Mgbe ị na-adọba ụgbọala, a naghị elebara ya anya, na-eme ka akụkụ taya ahụ na ọbụlagodi ahụ na-ete ụkwụ. Mgbe ịmachara ya, ọ dị mfe ịmepụta akụkụ nke taya ahụ.Ka oge na-aga, mpụta nke akụkụ taya gbara ọchịchịrị leakage, ma ọ bụ ọbụlagodi, ga-eme ka ihe puru omume nke ịkụ taya.
Tread na-ejikọta n'ozuzu ya nwere ike ịrụzi taya ahụ, mana enwere ike dochie anya mmebi ahụ n'akụkụ site na taya ọhụrụ.
Lee anya na oghere valvụ
Imirikiti ihe eji eme ọnụ ọnụ bụ ngwaahịa roba, ogologo oge were ga-apụta obi ike, mgbawa na ihe ndị ọzọ, na - eme ka taya daa.Ndụ nke roba valve nozzle bụ n'ozuzu 3-5 afọ, nke yiri ndụ nke taya, ya mere, mgbe dochie taya, valvụ onu nwere ike dochie ọnụ.Nwekwara ike ịgbanwe na valvụ aluminom, nke na-adịgide karịa okpukpu abụọ karịa roba valves.
Igwe okpu valvụ ahụ chọkwara nyocha na ngbanwe oge niile. O nwere ike ikewapụ ikuku, gbochie ájá, mmiri, mmanụ na mmebi ndị ọzọ na roba akara nke valvụ ahụ, ma gbatịa ndụ ọrụ nke isi valvụ ahụ.
Lelee ma ehiwe na oruru
Ọ bụrụ na ehiwe ahụ adịghị mma, ọ ga-emetụta njigide nke taya ahụ wee mee ka taya ahụ daa.Obere ntụpọ nke oghere ụkwụ adịghị mfe iji anya na-ahụ anya, ọ dịkwa mkpa ka onye ọkachamara na-arụzi ọrụ iji lelee.
Previous: Kedu ihe kpatara na taya ahụ ka na-ada mgbe enwere ike nrụgide
Ọzọ: Etu esi ekpebi ma taya ụgbọ ala bụ enweghị ikuku